DEG DEG:- Kulan deg deg ah oo goordhaw ka furmay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Kulan deg deg ah oo goordhaw ka furmay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho
Waxaa goordhow xarunta Xalane ee magaaada Muqdisho ka furmay kulan deg deg ah oo looga hadlaayo arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, kaas oo in badan dib u dhac uu ku yimid.
Kulankaan oo ay saxaafaddu dibad-joog ka tahay ayaa haatan lagu gorfeeynayaa sidii loo dhameystiri lahaa xildhibaanada harsan ee Aqalada sare iyo hoose ee baarlamaanka cusub Soomaaliya.
Waxaa kulankaan ka qeyb-galaya mas’uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiha baarlamanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating.
Sidoo kale, kulankaan ayaa waxaa looga hadlayaa dib u dhaca ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filaayay inay qabsoonto 30-ka bishaan November, balse ay haatan u muuqato mid dib u dhacday.
Kulanka kadib ayaa la filayaa inay mas’uuliyiintaasi saxaafadda uga warbixiyaan waxyaabihii looga hadlay iyo go’aanadda kasoo baxay kulanka.
Dhawaan ayay aheyd markii Ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating uu shaaciyay in doorashada madaxtinimada dalka laga yaabo inay dhacdo 15-ka bisha soo socoto ee December.
Michael Keating ayaa xilligaasi rajo xumo ka muujiyay inay doorashada ku qabsoonto xilligii hore loogu balammay oo ahayd 30-ka bishaan aynu ku jirno oo muddo labo cisho kaliya ay ka harsan tahay.